ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ အဓိကပါဝင်သောအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကု?? - Yangon Media Group
ပြည်ခိုင် ဖြိုးနှင့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဓိကပါဝင်သော အဖွဲ့ တင်ပြလာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအ ခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင် ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့သည်။ မေ ၂၉ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ယင်း ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ယင်းဥပဒေကြမ်းကို တင်ပြ လာသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၅ဦးထဲတွင် ရွေး ကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄ဝ နှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁ဝ၅ ဦးတို့က လက် မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က ပြော သည်။
”ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ မူကြမ်းတင်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့အထဲ မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရယ်၊ တခြား ပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်ပါတယ်။ ကျန်တာတော့ တပ်မတော်သားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အများ စုပေါ့”ဟု ယင်းဥပဒေကြမ်းကို ဦး ဆောင်တင်ပြသူ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက် တာမောင်သင်းက ပြောသည်။ အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းက လက် ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်စုစုပေါင်း ၆၅၇ ဦး၏ ရာ ခိုင်နှုန်း၂ဝကျော်က လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့်အတွက် ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၃ နှင့်အညီ လက်ခံဆွေးနွေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဥပဒေမူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင် ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၅ နှင့်အညီ လွှတ် တော်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးခြင်း မပြုမီ အသေးစိတ်လေ့လာစိစစ်နိုင် ရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဝင်အားလုံး ပါဝင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယ အကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော် မတီသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ရုံးမှ မေ ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့ထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်နာယကကပြောသည်။ အဆိုပါတင်ပြသည့်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပြင် ဆင်သည့်အချက်(၄)ပါရှိပြီး ယင်း ပြင်ဆင်သည့် အချက်(၄)ချက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၈ (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မ ၃၂၂ နှင့် ပုဒ်မ ၄ဝ၂ ခြေဆင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်းက ”ဒီဥပဒေ မူကြမ်းမှာ အဓိကအဆိုတင်သွင်း တာက သမ္မတလုပ်ပိုင်ခွင့်(၂)ချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံ ရုံး(၁)ချက်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင် (၁)ချက် စုစုပေါင်း (၄)ချက် ပုဒ်မ(၄)ခုကို တင်သွင်းထားပါတယ်” ဟုပြောသည်။
အသက်(၂၅)နှစ်အထက် မြန်မာအမျိုးသား ၁ဝဝ လျှင် ၆ဝ ခန့် ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲနေ၊ နှစ်စဉ်ရေ??
ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပေးရေးကိစ္စ ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့အကြား ပဋိပက္ခတွင??
ပုဂံဒေသခံများ တောင်းဆိုသည့် ဇုန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးရေး ကိစ္စ စည်းမျဉ်းများ အတည်ပြုပြီးပါက
မိုးသည်းထန်ခြင်းကြောင့် မြစ်ရေကြီးသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် လူဦးရေ လေးထောင်ကျော် ရေဘေးသင့်
ဘုရားဖူးပြည်သူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ ညအချိန်ဈေးဝယ်နိုင်ရန် ရွှေစည်းခုံဘုရားအနီး၌ ညဈေးတန်းဖွင့်မည်